Inona no atao hoe Acupressure Mat? Nahazo valiny vitsivitsy izahay - Fahasalamana
Fahalalana & Fanabeazana Boky Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Iraisam-Pirenena Drafitra Sy Torohevitra Mpinamana Sy Fianakaviana Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Lamaody Mpanambady Products Vaovao Momba Ny Lamaody
Inona no atao hoe Acupressure Mat? Ary mety milamina ve ny miala sasatra eo amin'ny farafaran'ny paoketra plastika?
Gaiam / Sofia Kraushaar
Toy ny fampijaliana ny fandriana ambony spikes plastika. Ahoana anefa raha nilaza taminao izahay fa ny fanaovana izany mandritra ny 15 minitra isan'andro fotsiny dia mety hanampy amin'ny fanalefahana ny adin-tsaina, mampitony ny hozatra marary ary mampihena ny fihenjanana? Izany no hevitra ao ambadiky ny acupressure mats, ny fironana farany momba ny fahasalamana izay mitsabo ny tsy mahazo aina, Bebe kokoa tsy mahazo aina. Mianara bebe kokoa momba ny tombontsoa ara-pahasalamana amin'ny acupressure sy ny fomba fampiasana tsara ny tsihy eto ambany.
Mifandraika: Ny teboka 6 fitsaboana tsara indrindra amin'ny fanahiana
Inona no atao hoe acupressure mat?
Ny matroka akupresy dia tsihy malefaka sy malefaka izay misy tsimatra plastika an-jatony. Natao hapetraka, hipetraka na handeha mandritra ny 15 ka hatramin'ny 30 minitra isan'andro. Ny tsihy dia azo ampiasaina amin'ny faritra samihafa amin'ny vatana, manomboka eo amin'ny faladian'ny tongotra hatrany an-damosin'ny tendany, ao anatin'izany ny tratra, ny vatan-tratra, ny feny ivelany ary ny lamosina ambany.
Mona Dan, LAc., MTOM mpitsabo raokandro, acupuncturist ary mpanorina ny Fanasitranana Vie manazava: Ireo toro-hevitra kely amin'ny tsihy dia manetsika ireo teboka fanerena. Rehefa entanina ny teboka tsindry dia mandefa famantarana any amin'ireo ivon-toeran'ny ati-doha izy mba handefa ireo fambara mety amin'ny vatana mba hifehy ny fikorianan'ny rà, izay miala sasatra sy mifehy.
Araka ny efa noeritreretinao azy, ny acupressure dia mitovy amin'ny fitsipika amin'ny akupunktur, ilay fomba fanasitranana taloha izay mampiasa fanjaitra manify mba hikendrena sy hitsaboana aretina isan-karazany. Na dia ilaina aza ny acupuncturist mahay iray hametahana ny fanjaitra amin'ny toerana marina (mifantoka amin'ny meridiens manokana ao amin'ny vatana izy ireo, ankoatry ny hozatra, hozatra ary hozatra mampifandray isan-karazany), dia afaka mampihatra akupressure mora foana sy azo antoka ao an-trano ianao.
Inona avy ireo olana azo resahina amin'ny acupressure?
Ny fanadihadiana iray avy amin'ny Oxford University dia mampiseho izany acupressure izany dia afaka manampy amin'ny fanaintainana ny fanaintainana sy ny havizanana, fa io fomba fanao io koa dia nampiasaina nandritra ny taonjato maro mba hampihenana ny adin-tsaina sy ny tebiteby, manampy amin'ny fivezivezena sy ny tsy fahitan-tory.
Fa ny spikes dia tsy mahazo aina!
Eny, izany no karazana hevitra. Ny mpampiasa sasany dia mampitaha ny fampiasana ny tsihy amin'ny fahatsapana fanorana lalina. Saingy rehefa mandeha ny fotoana, ny vatanao dia hihena amin'ny fahatsapana, ka tsy dia mamparary azy ny miala sasatra eo an-tampon'ny matotra akupresinao. Raha mbola somary mitandrina ianao momba ny fanaintainana mandritra ny fampiasana vitsivitsy voalohany dia manaova akanjo manify na asio lambam-pandriana manify eo amboniny, fa tsy misy matevina noho izany, hoy i Dan.
Amin'ny firy ny andro no tsara indrindra hampiasana an'ity tsihy ity?
Dr. Nigma Talib , dokotera naturopathic, dia manoro hevitra ny hampiasana ny matro acupressure-nao amin'ny hariva, indrindra raha mampiasa azy ianao hanatsarana ny kalitaon'ny torimaso. Rehefa miala sasatra ny hozatra ianao ary mampitony ny rafi-pitatitra dia mampihena ny kortisol, izay hormonina miady saina ary rehefa avo loatra io hormonina io dia tsy afaka matory tsara izy, hoy ny fanazavany. Ny fampidinana an'io amin'ny hariva dia hahazo tombony bebe kokoa amin'ny torimaso mampitony.
Tombony bebe kokoa: Ny tsihy akupressure dia azo entina, tsy dia lafo ary mora ampiasaina saika na aiza na aiza; ny gorodona, ny sezalava, ny fandriana, sns. Raha mbola manana faritra fisaka sy efitrano fatoriana ianao dia mandeha ny fandrianao. Hell, azonao atao aza ny mametraka ny fandrianao amin'ny seza birao ary mioty ny tombony azo avy amin'ny acupressure rehefa miasa ianao (na dia tiako manokana aza ny mametraka ny tsihy eo ambanin'ny tongotro raha WFH aho).
ny satro-boninahitra fizarana 2 fizarana 9
Misy singa ara-tsaina amin'ny fampiasana matroka akupresy ve?
Na dia afaka mamakivaky ny Instagram ianao na mamaly ireo mailaka raha mandry eo am-pandriana acupressure ianao dia tsy hanampy anao hahatratra ny toetranao milamina indrindra izany. Manoro hevitra anao foana aho mba haka sary an-tsaina ny toerana tony indrindra nandehananao, toy ny ala, tendrombohitra na ranomasina, hoy ny Dr. Nigma. Ny fakana sary an-tsaina ary ny fihainoana feo na mozika afaka mamerina ilay traikefa mampitony aza dia afaka manampy be dia be. Ary aza adino ny miaina!
Mifandraika: Ahoana ny fomba hanomezana otra fanaintainana miampy 2 minitra sy mampihena ny fihenjanana
HIVIDY IZAO HIVIDY IZAO
Mat ny tsimok'aretin'ny tsimoka
ProsourceFit Acupressure Mat sy Pillow Set
Pranamat Mat sy ny ondana fanorana ondana
Sokajy Lakozia Maharitra Fitaizana Gynaec
horonan-tsary romantika sarimihetsika anglisy
fampihetseham-batana hampihenana ny tavy andilana
sarimihetsika holomanina feno romantika
sakafo hampihena ny fahalavoan'ny volo
fanafody mba hanala endrika volo
tantaram-pitiavana sarimihetsika Hollywood list